Ọnọdụ ọdachi nke ofmụaka ndị Katọlik Katọlik | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Joaquin Garcia | | Akụkọ ndụ, Akwụkwọ, Novela
Na-adịbeghị anya, akụkọ ihe mere eme akwụkwọ e họọrọ isiokwu nke ọtụtụ ndị na-agụ, si Aha nke rose elu Ogidi nke ụwa, atụmatụ ndị mgbe ochie na akụkọ ihe mere eme pụtara ìhè na shelf nke ọtụtụ ọbá akwụkwọ na ụlọ ahịa akwụkwọ. A na-akpọ ọrụ ikpeazụ na mgbakwunye na ịbụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme bụ ọrụ nyocha sayensị Ọnọdụ ọjọọ nke Childrenmụaka nke Ndị Eze Katọlik. Ọrụ na-anakọta ọdachi nke ụmụ nwoke ise nke ndị ọchịchị Katọlik, ọdịnihu ha na ọrụ ndụ ha rụrụ na Modern History of Europe na Spain.
N'ime afọ ole na ole gara aga, ọtụtụ ndị edemede kpebiri ịmepụta ma gwa akụkọ banyere ndị ọchịchị Katọlik, nke ikpeazụ n’ime ha bụ Vicenta Marquez de la Plata, onye edemede nke akwụkwọ akụkọ ihe mere eme onye chọrọ ịkọ ndụ ọjọọ nke ụmụaka nke ndị Ọchịchị Katọlik ebe ọ bụ na ha nọ n'otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ ndị zigara ọchịchọ nne na nna ha.
Ọzọkwa, Vicenta Márquez ahọrọwo ụfọdụ ndị isi ma ọ bụ bụrụ ụmụ ọhụrụ, ebe ọ bụ na Spen nanị okwu ahụ bụ “onye isi"Maka onye ga-eketa ocheeze ahụ, nwere ezigbo mmasị na akwụkwọ akụkọ na akụkọ ifo kemgbe ụmụaka niile nke Ndị Ọchịchị Katọlik ha emeela ka ndụ dị mkpụmkpụ.
Vicenta María Márquez de la Plata, onye edemede, bụ ọkọ akụkọ ihe mere eme na onye gụsịrị akwụkwọ na Genealogy, Heraldry na Nobility si CSIC Institute. Ọ bụ prọfesọ na Mahadum Lisbon nke oge a na Mahadum Seville. Agbanyeghị na ọpụrụiche ya bụ oge ochie, Vicenta enweela ọganiihu na-aga nke ọma n'oge ndị ọzọ, dịka egosiri na Ọnọdụ dị egwu nke ụmụ nke Ndị Eze Katọlik ma ọ bụ ọrụ ya kachasị ọhụrụ, Nke ahụ bara uru.
1 Dị ka ọdịnala ndị Spain si kwuo, a ga-enwe naanị otu onye isi ma kpọọ ndị fọdụrụ n'ọchịchị ocheeze Infantes
2 Pedro Mártir de Anglería: «Ebe a bụ olileanya nke Spain».
3 Ọ bụ ụmụ ụmụ ọ bụghị ụmụ nke Ndị Eze Katọlik nwere okpueze
4 Okwu ndị dị mkpa
Dị ka ọdịnala ndị Spain si kwuo, a ga-enwe naanị otu onye isi ma kpọọ ndị fọdụrụ n'ọchịchị ocheeze Infantes
Ọnwụ, alụmdi na nwunye na-enweghị obi ụtọ, ọrịa, wdg…. Ọtụtụ isiokwu lekwasịrị anya banyere ụmụ Isabel na Fernando na nke ahụ gbasiri ike ndụ nke ụmụ ọhụrụ a na steeti Spanish akaghi aka.
Anyị niile maara akụkọ ịhụnanya nke Juana dị nzuzu, nke Vicenta Márquez de la Plata nwere ezigbo mmasị na izi ezi na ọrụ ya "Ọnọdụ ọjọọ nke Childrenmụaka nke Ndị Eze Katọlik”, Ma ole na ole maara na akụkọ ọjọọ nke nwa eze na-eto eto John ma ọ bụ otú Catherine, nwanne ha nwanyị, bụ eze nwanyị England na nwunye mbụ nke Henry nke Asatọ, eze mbụ gbara alụkwaghịm na onye guzobere ịgba alụkwaghịm n'etiti ndị Kraịst.
Ndị a nwere ike ịbụ ụmụ nke ndị Ọchịchị Katọlik bụ ndị kacha nwee mmetụta n'akụkọ ihe mere eme. Mgbe ọnwụ Juan gasịrị, usoro ndị eze Trastamara, nke ndị Ọchịchị Katọlik bụ nke ya na ọ bụ usoro ndị eze si abịa, bịara na njedebe ma nke a pụtara gọọmentị nke otu obere ọchịchị ala Spen site ndị ọchịchị mba ọzọ gawa Iberian Peninsula.
A mụrụ Juan na mkpọsa ahụ Mmeri nke Alaeze GranadaỌ na-agụsi ndị mụrụ ya agụụ ike nwa nwoke na n'oge ahụ ha enweghị na site na inwe Juan, ọ bụghị naanị ndị ọchịchị Katọlik kamakwa alaeze niile tụkwasịrị obi na nwa eze a.
Juan lụrụ nwanne nwanyị Felipe el Hermoso, n'adịghị ka Juana la Loca, Juan na nwunye ya hụrụ ibe ha n'anya na ọ bụ ịhụnanya n'anya mbụ, mana ahụ ike Juan na-esighi ike belata akara aka nke alụmdi na nwunye a ma gwụchaa ezumike, Juan nwụrụ Enwere m olileanya nke Spain.
Ọrụ Catalina bụ nke doro anya, ma ọ bụ nke ka doo anya. Dị ka nwunye nke Henry VIII, Catherine bụ Eze Nwanyị England na alụmdi na nwunye ha bụ ma eleghị anya nsogbu mbụ nke dynastic banyere okpueze na ihe nketa nke dị n'oge a, nsogbu ndị amụrụlarị na nkwadebe nke agbamakwụkwọ ahụ.
Pedro Mártir de Anglería: «Ebe a bụ olileanya nke Spain».
Ihe ọzọ dị iche bụ na onye bidoro ngwụsị nke Catalina bụkwa onye Spain. Anyị niile maara ihe mere n’etiti Anne Boleyn, Henry nke Asatọ na nwunye ọjọọ ha bụ Catherine. Otu ụzọ atọ nke na-agbanweghị mba ahụ kamakwa okpukpe dị iche iche nke oge a, ọkachasị okpukpe ndị Katọlik Katọlik.
La akụkọ ịhụnanya na-adịghị mma banyere Juana La Loca Anyị niile maara ya, ma ọ bụ site na klaasị anyị na History ma ọ bụ site na fim a ma ama nke otu aha. N'adịghị ka ụmụnne ya, Juana anwụghị ọnwụ kama ọnwụ nke ndị ikwu ya. Felipe el Hermoso, nwa nke ndị eze ukwu Austrian na ịhụnanya nzuzu nke Juana, bịara nleta ọnwụ n'oge na-adịghị anya na nke a kpalitere ara nke Juana, onye nwere ọtụtụ ụmụ nke onye isi Burgundian na onye ga-abụ ndị ọchịchị n'ọdịnihu nke Alaeze Spen na alaeze ukwu Austro-Hungaria. Ejikọtara Juana ngwa ngwa na nwa okorobịa Austro-Hungaria bụ onye ndị ọchịchị Katọlik kwuru na ọ ga-abụ mmekọrịta dị n’etiti Spain na alaeze Central Europe. Ọ bụ ezie na e mere ndokwa alụmdi na nwunye a, ndị ịhụnanya dị n'etiti Juana na Felipe nwere oke ọmịiko na ara, ihe ga-eweta nsonaazụ dị egwu.
Enweghi ike ịchọta njedebe nke Nwada Maria y nke Isabel dereInfantas nke Spain na ndị eze nwanyị nke Portugal, nke mbụ ọ bụ Doña Isabel lụrụ onye Portuguese eze na mgbe ọ nwụsịrị ọ bụ Doña María onye were ọnọdụ ya dị ka nwunye na eze nke Portugal. Ma ọ bụ ma eleghị anya enweghị mmata a na-ezighi ezi banyere akụkọ ya. Ma njikọ nke María na nke Isabel gosipụtara mgbanwe dị ukwuu na akụkọ ihe mere eme nke Spain n'oge a. Ndị otu a kwere ka nwa nwa nwa ndị Katọlik, Felipe nke Abụọ, bụrụ eze Pọtugal na Spen, si otu a jikọta onwe ha mbụ na ogologo oge. Ala dum dị na Iberia n'okpuru otu eze.
Ọ bụ ụmụ ụmụ ọ bụghị ụmụ nke Ndị Eze Katọlik nwere okpueze
N'ezie umuaka ndi Katoliki nwere ezigbo akara ma bie ezigbo ndu, dị ka a ga - asị na Machiavelli n'onwe ya dere ha, ọ bụ ezie na ọ ga - ekwu eziokwu, onye edemede ukwu dere ọrụ ya "Onyeisi”N’ịsọpụrụ nna ya, bụ Eze Ferdinand onye Katọlik.
Ọnọdụ ọjọọ nke Childrenmụaka nke Ndị Eze Katọlik Ọ bụ ọrụ akụkọ ihe mere eme na obu ezie na ha nwere akwukwo ikike nke akwukwo, ihe omuma ha, akuko ha, ihe omuma ha bu ezi okwu. Nke a mere ka ọrụ ahụ bụrụ ezigbo nchịkọta nke ihe mere na Spen ma ọ bụ Spen (dị ka ndị bi n'oge ahụ kpọrọ ya) n'agbata 1495 na 1504, afọ nke Isabel la Católica nwụrụ na nke naanị otu nwa nwanyị bi na ya. , Juana, onye a kacha mara amara Juana onye nzuzu.
Ikekwe, m gaara ahọrọ na Vicenta Márquez de la Plata nwere oké ọchịchọ ma kwuo ihe banyere ụmụ ụmụ ndị Ọchịchị Katọlik, anaghị m ekwu maka etu o si kpọtụrụ ha n'ọrụ ahụ kama inye ha nduzi ọrụ, ọ bụghị n'efu, Mary nke Tudor, ada Catherine na Henry nke Asatọ na Charles nke Ghent, nwa Juana na Felipe el Hermoso, bụ ndị eze England na Spain n'otu n'otu. Aha ndị ụmụ ụmụ nwetara mana ụmụ ụmụ Ọchịchị Katọlik enwetaghị ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ọrụ nke Vicenta Mª Márquez de la Plata gosipụtara anyị bụ ọrụ pụrụ iche nke nwere ike ịba uru n'oge anyị na-agụ akwụkwọ ma ọ bụ maka oge agụmakwụkwọ anyị, ebe ọ bụ na oge abụọ ọrụ ahụ dị ezigbo mma. Yabụ ọ bụrụ na ị hụrụ akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ akụkọ ntolite n'anya, buru ọrụ a n'uche ma ọ bụrụ na ị hụ na ị nwere mmasị n'ịgụ ya, ọ bụ ihe na-efu ihe ọ bụla.
Okwu ndị dị mkpa
El ọchịchị nke Ndị Ọchịchị Katọlik ọ bụ site n’afọ 1479 ruo n’afọ 1504 (ọnwụ Isabel la Católica).
Mụ nke ndi nwe Katọlik dị 5: Isabel, Catalina, María, Juana na Juan.
Naanị nwa nwoke nọchiri ndị ọchịchị Katọlik bụ Juana, onye onweghi mgbe ochichi n'ihi na ara bu ya ọ bụ ezie na o nwere aha nke Queen of Castile.
Na afọ 1504 Isabel onye Katọlik anwụọ na 1516 Fernando el Católico, mgbe nke a gasịrị onye ọchịchị Kadinal Cisneros pụtara.
Na ndi-isi Katọlik echiche nke «Spain»Ebe ala eze obula jigidere onwe ha.
Ortiz, Alonzo (1983):Mkparịta ụka gbasara agụmakwụkwọ nke Prince Don Juan, Nwa nke ndị ọchịchị Katọlik. Mbipụta José Porruá Turanzas, Madrid.
Hickling Prescott, W. na Val Valdivieso Mª. I. nke, (2004): Akụkọ banyere ndị eze Katọlik. Castile na Leon.
Val Valdivieso Mª. I. nke,(2004): Isabel I nke Castile (1451-1504). Mbipụta nke Orto, Madrid.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Akụkọ ndụ » Ọnọdụ ọjọọ nke Childrenmụaka nke Ndị Eze Katọlik
Atịkụl! nnukwu nyocha na mmeju akụkọ ihe mere eme 🙂
Ọ dị mma ịgụ isiokwu ndị dị ka nke a.
Eziokwu bu na akwukwo a mara ezigbo mma. Achọpụtala m na ọ na-ewute m obere obere ọdịbendị akụkọ ọdịnala nke ndị mmadụ nwere na mba ndị ọzọ na akụkọ ihe mere eme nke Spain.
Ugbu a ndụ ụmụ nke ndị Katọlik Katọlik ka amaara nke ọma, mana karịa ihe niile maka ihe ịga nke Isabel, usoro TVE1 na-agbasa.
Eziokwu bu na tupu Isabel enwere usoro ndi ozo nke gosiputara ndu umuaka ndi ochichi ndi Katolik, dika Los Tudors. Enwere m olileanya na obere nke nta nke ọzọ nke ụdị a ga-apụta. Ekele na ekele maka ikwu !!! 😉
Zaghachi Joaquin García
Agbakwunyere na ndepụta m ịgụ, na ndị ọzọ mgbe iwebata dị ka nke a.
Zaghachi Eva María Rodríguez
Lee anya na ọ na-esiri akụkọ akụkọ ike ijide m ma gụọ ya (ihe masịrị gị), mana ị rụzuru ya Joaquin. Edemede dị oke mma na nke zuru ezu. !! Ndeewonu !!
Daalụ nke ukwuu Carmen, ọ bụ ezie na isiokwu gị na-ejidekarị m nke ukwuu. Ekele, na-ekele gị nke ukwuu. 😉
I meela nke ukwuu maka edemede a dị egwu! Etinyere m ya na ndepụta m nke akwụkwọ m ga-agụ.
Kedu mmeghe… Ana m etinye ya na ndepụta ndepụta m na-echere.
Naanị m emelitere ndepụta ihe m na-eme nke mbụ. Ọ dị ezigbo mma.
Ekwenyere m na ihe ndị ọzọ kwuru, isiokwu zuru oke.
Adịghị m nnukwu mmasị na akụkọ ihe mere eme, nke m tinyere n'akụkụ ọtụtụ afọ gara aga, mana isiokwu a mere nke ọma na site na ihe ị kwuru, akwụkwọ a tụlere adịghị ka akwụkwọ akụkọ mgbe ochie vendeburras hoax.
Iji nweta okwu a ma kwado ihe metụtara isiokwu nke ndị nketa nke ocheeze, mana nke ụdị dị oke egwu, ana m ahapụrụ gị ntụzi-aka nke akwụkwọ ọgụgụ dị mkpirikpi chọrọ akpọrọ 'El amigo de la muerte', nke Pedro Antonio dere de Alarcón, otu n’ime ịhụnanya anyị.
Daalụ Yabier, maka ikwu okwu na maka onyinye. I nyela m echiche ma ọ bụ na ọ nwere ike ịbụ oge iji nyochaa ochie na ALiterature. Daalụ nke ukwuu 😉
Enweghị tilde dijo
Daalụ maka isiokwu ahụ, nke na-atọ ụtọ
Ahụrụ m isiokwu ahụ n'anya. Ma enwere m ajụjụ banyere Juana La loca. Na-ekwu na ara na-agba ya mgbe Felipe nwụsịrị. Ma Felipe n'onwe ya, ọ kpọchighị ya mgbe ndị Cortes jụrụ inwete ya? Ọ bụ na o doghị anya na ọ na-arịa ọrịa, mana na ọ na-achọgharị ya nke ukwuu n'ihi ekworo. Aghọtara m n'ụzọ ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ahụrụ m isiokwu ahụ n'anya ma na-atụ anya ịgụ akwụkwọ a. Daalụ maka ịkekọrịta!
Ndewo Ana, ihe banyere Juana la Loca dịtụ mgbagwoju anya, ọ bụghị naanị maka oge ahụ kamakwa maka akụkọ ihe mere eme n'ozuzu ya. Ndị Cortes jụrụ imebi ya, mana Felipe enwetaghị iyi Cortes, yabụ amaghị m oke ọ bụ akụkọ edemede, kedu etu ọ bụ eziokwu na oke ọ metụtara Spain, n'ihi na ọ nwere ike. mechie ma ọ bụ awa ole na ole ma ọ bụ ụbọchị ole na ole. Gịnị ma ọ bụrụ na amata na tupu ọnwụ Felipe, Juana egosighi ihe ngosi nke ara (ihe anyị ghọtara taa dị ka ara) na mgbe Felipe nwụsịrị ọ gosipụtara ha. Ọbụna na ihe niile, Juana natara aha eze nwanyị Castile, mana ọ dịghị mgbe ọ jere ozi dị ka nke a, ọbụnadị mgbe nnupụisi nke Comuneros. Site na nke a m na-ekwu na ọ bụ ihe mgbagwoju anya dị ka ị ga-ahụ. Site n'ụzọ, daalụ nke ukwuu maka okwu gị na maka otito. Echiche kacha mma;)
Chukwubuikem Nwachukwu dijo
Na-akpali nnọọ mmasị. Anyị ga-agụ ya! 😉
Zaghachi Ascen Jiménez (@ AscenJimnez1)
Anụla m banyere akwụkwọ a, ma ugbu a, echere m na ekpebiela m ịgụ ya! Daalụ maka ozi ahụ na ezigbo ezigbo peeji!
Zaghachi Fran Marín
Ana m ekele gị nke ukwuu maka echiche gị na ekele gị, n'ezie, maka obi abụọ gị, enwere m olileanya na ị masịrị akwụkwọ a na ị ga-agwa ya ebe a, ọ bụrụ na ọ masịghị gị. Na n'ezie, ọ bụrụ na ị nwere ike, enwere m obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị tinye ihe banyere akwụkwọ nke owuwe ihe ubi gị, yabụ ndị na-agụ akwụkwọ n'ọdịnihu nwere ike inwe echiche zuru ezu banyere akwụkwọ a. Ana m ekele unu ọzọ. Ekele 😉
Akwụkwọ a dara ada !! Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ihere na ụfọdụ ụmụaka ama ama na ndị ọzọ anaghị ahụ ya anya dịka María bụ onye, ​​ọbụlagodi ma ọ bụrụ naanị maka na o nwere ụmụ 10, enwerịrị ike ịnọ n'ọnọdụ ya na akụkọ ntolite. Anyị niile maara na Juana bụ nne Carlos I mana ọ nweghị onye na-echeta na Maria bụ nne nke Isabel de Portugal, nwunye Carlos I na eze nwanyị nke Alaeze Ukwu Dị Nsọ.
Jesus Nwachukwu dijo
Edemede mara mma, Joaquin. Enwere m ezigbo mmasị na akwụkwọ akụkọ ihe mere eme kemgbe ọtụtụ afọ. M na-ede akwụkwọ ahụ. Naanị ịgụ isiokwu gị na-eme ka ịchọrọ ịmalite ịgụ ya. Daalụ maka kwuru, n'ezie na-akpali.
Zaghachi Jesús Alvarez
Ebee ka m nwere ike ịzụta akwụkwọ ahụ
A mụrụ Juan na Seville mana n'oge agha obodo Castilian n'etiti Isabel na Juana la beltraneja.
Zaghachi javier urbasos arbeloa